Xalka furitaanka furitaanka ee Apple Watch ayaa dhowaan imaan doona | Wararka IPhone
Isticmaalayaasha qaarkood ayaa ka warbixinaya dhibaato xagga shaqada furitaanka iPhone 13 ee Apple Watch. Dhibaatadan oo u muuqata mid baahsan waxaa sabab u ah “isgaarsiinta” u dhexeysa saacadda iyo aaladda cusub ee Apple, wax baa khaldan sidaa darteedna Kuma furmo Apple Watch marka aan hawsha shaqeyneyno.
Dhibaatadani waxay umuuqataa inay xoogaa maanta walaac badan tahay maadaama adeegsiga maaskaro ay qasab tahay meelo badan oo adduunka ah. Iyada oo shaqadu tahay mid firfircoon, saacaddu waxay mas'uul ka tahay furitaanka iPhone -ka laakiin haddii hawshani guuldaraysato waa inaan geli lambarka lambarrada ama ka saar maaskarada ...
Apple waxay durba ka shaqeyneysaa xalka imaan doona cusboonaysiinta soo socota
Si rasmi ah uma aysan muujin taariikhda nooca xiga ee softiweerka loo sii dayn doono iPhone -ka laakiin waxay ka tilmaamayaan shirkadda Cupertino in nooca xiga ee softiweerka uu saxi doono dhibaatadan. Dukumiinti taageero Apple ah oo gudaha ah ayaa lagu daatay internetka oo ay daabaceen warbaahinta sida 9To5Mac waxay tilmaameysaa in Waxay xallin doonaan qaladka sida ugu dhakhsaha badan.
Apple waxay aqoonsatay arrin meesha Furitaanka Apple Watch aysan ku shaqeyn karin iPhones 13. Waxaa laga yaabaa inaad aragto farriinta "Ma awoodo inaad la xiriirto Apple Watch" haddii aad isku daydo inaad furto iPhone -kaaga adigoo xiran maaskaro, ama waxaad arki kartaa Ma dejin kartid ku fur Apple Watch.
Tani shaki la'aan waa warka ugu wanaagsan ee adeegsadayaasha saacadda caqliga leh ee Apple iyo iPhone -ka cusub ee 13 ay heli karaan.In kasta oo ay run tahay ilaa inta nooca cusub la soo saarayo waa inay sameeyaan iyada oo aan la helin nidaamkan furitaanka, Apple wuxuu diyaar u yahay hadda dhibaatada oo sida ugu dhakhsaha badan u xallin doona. Warbaahinta qaar ayaa xitaa tilmaamaysa taas Nooca macruufka 15.0.1 ayaa la sii deyn karaa si loo xaliyo guuldaradaan cusub ee iPhone 13. Waan sugi doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Xalka furitaanka guuldarrada ee Apple Watch ayaa dhowaan imaan doonta
Hadda waxaa laga heli karaa Apple Arcade LEGO Star Wars Battles